Ukubuka konke kweGelken - Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd.
Isungulwe ku-2012, UGelken Gelatiningumkhiqizi onguchwepheshe ekukhiqizeni ikhwalithi ephezulu ye-Pharmaceutical gelatin, i-gelatin edliwayo kanye ne-hydrolyzed collagen. Imikhiqizo isetshenziswa kakhulu kwezokwelapha, i-capsule, imboni yokudla, izimonyo, imikhiqizo yezempilo nezinye izimboni.
Kanye nokuthuthukela ngokuphelele kulayini wokukhiqiza kusukela ngo-2015, indawo yethu isezingeni eliphezulu emhlabeni. Sinohlelo oluphelele lokuphathwa kwekhwalithi kanye nokuphathwa kokuphepha kokudla okuqinisekiswe yi-ISO9001, ISO22000, FSSSC22000, GMP. Ithimba lethu lokukhiqiza lisuka efektri ephezulu ye-gelatin enolwazi lweminyaka engama-20. Manje sinomugqa wokukhiqiza we-3 we-gelatin onamandla waminyaka yonke wamathani ayi-15,000 nomugqa owodwa we-Hydrolyzed Collagen onamandla angama-3000tons wonyaka
Uhlelo lwethu lwe-QA / QC lochwepheshe futhi ngaphezu kwe-400 ye-SOP iqinisekisa ukuhlinzeka ngemikhiqizo ezinzile, ephephile, yemvelo nenempilo kumakhasimende ethu. Izinga lekhwalithi lihlangabezana ne-GB6783-2013, i-China pharmacopoeia, i-USP, i-EP. Ukuthengisa kwethu kumboza lonke iChina, i-USA, iYurophu, iSouth Korea, i-India, i-Southeast Asia kanye namazwe amaningi.
Isungulwe ngo-2012, iGelken Gelatin ingumkhiqizi onguchwepheshe ekukhiqizeni ikhwalithi ephezulu ye-Pharmaceutical gelatin, i-gelatin edliwayo kanye ne-hydrolyzed collagen.
Kanye nokuthuthukela ngokuphelele kulayini wokukhiqiza kusukela ngo-2015, indawo yethu isezingeni eliphezulu emhlabeni. Sinohlelo oluphelele lokuphathwa kwekhwalithi kanye nokuphathwa kokuphepha kokudla okuqinisekiswe yi-ISO9001, ISO22000, FSSC22000, GMP, "License Production License" kanye ne- "Edible Food Production Licence" ekhishwe yiNational Food and Drug Administration. Ithimba lethu lokukhiqiza lisuka efektri ephezulu ye-gelatin enolwazi lweminyaka engama-20. Manje sinomugqa wokukhiqiza we-3 we-gelatin onamandla wonyaka wamathani ayi-1 5,0 0 0 no-Hydrolyzed Collagen umugqa owodwa onamandla angama-3000tons
Imikhiqizo ye-Gelken isetshenziswa kakhulu kuma-capsules aqinile, amaphilisi athambile, amaphilisi, uswidi we-gummy, i-ham, iyogathi, ama-mousses, ubhiya, ujusi, imikhiqizo ekheniwe, izithako zokudla, ukudla kwezempilo, imikhiqizo yobisi, amasoseji
Umsebenzi wethu ukuhlinzeka ngokuphepha, ikhwalithi ephezulu kanye nesisekelo somkhiqizo ozinzile ngesidingo samakhasimende. Sithatha wonke umthwalo emikhiqizweni yethu nasensizakalweni, ukuba ngumhlinzeki onokwethenjelwa nothembekile emkhakheni we-gelatin ne-collagen
Isungulwe eXiamen, eFujian.
Qala ukukhiqizwa kwe-gelatin eXiapu, eNingde, eFujian. With 20 iminyaka R & D ithimba.
Ukukhishwa kweGelatin kufinyelele ku-10000 MT.
I-KAIPPTAI yasungulwa, yaqala ukukhiqizwa kwe-Collagen.
Okukhipha minyaka yonke kweCollagen kufinyelele ku-3000 MT.
Ukuhlelwa kwezezimboni kwaqedwa futhi umkhombandlela wentuthuko eminyakeni eyishumi ezayo wanqunywa.
Okukhipha minyaka yonke kweGelatin kufinyelela ku-15000 MT.